Samihafa ilay andrana nambaran’ny Filoha tany Toamasina sy ny covid-organics. Fomba fitsaboana na “protocole” miisa 3 no novolavolain’ireo komity siantifika, ka voalohany ny fampiarahana ny Hydroxychloroquine sy Azithromycine, faharoa ny CVO. Fitsaboana nentim-paharazana io, ka tsy hatao mihitsy ho endrika tsindrona. Ny fahatelo dia fanambarana fanafody 2 miendrika tsindrona izay tsy ny CVO mihitsy, ary tsy nilaza izany ny Filoha, hoy ny fanazavana. Tsy tambavy akory no hatsindrona fa kambam-pafanafody roa efa fantatra ary efa nahazo alalana na eto Madagasikara na any ivelany, hoy ny vaksiny. Tsy vaksiny na fanefitra ilay izy fa fanafody efa fantatra, ary ilay andrana rehefa voaporofo dia haparitaka maneran-tany, any amin’ireo firenena rahavavy any Afrika. Efa nandalo teo anivon’ny Akademiam-pirenena momba ny fitsaboana. Nambara fa ny ekipa rehetra ao anatin’ilay manao andrana dia manaraka ny fenitra ara-tsiantifika. Nahazo fankatoavana tamina komity siantifika io andrana io, ary tsy an-tery amin’ny maha andrana azy fa mila alalana amin’ny marary. Iaraha-miasa amina manam-pahaizana avy any Etazonia, Thailland,… ary ao anatin’ilay andrana tohanan’ny OMS na ilay antsoina hoe “solidarity trial”. Efa adihevitra goavana teto sy tany Afrika ny andrana vaksiny, ary maro ny fanehoan-kevitra tsy teto ihany fa hatrany Afrika no naneho fa tsy “cobaye” ny Afrikanina. I Eoropa no be maty indrindra ka nahoana no tsy atao any? Isan’ny naneho izany ireo mpilalao kitra malaza tahaka an-dry Didier Drogba sy ry Samuel Eto’o. Vao tsy ela no nifampiresaka tamin’ny Filoha ny Lehiben’ny OMS ary nanaiky ny hanaovana andrana ny CVO ka sao ity fanaovana andrana ara-baksiny ity no tambin’izany ?